YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, September 19
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဟီလာရီ ကလင်တန်တို့
ယနေ့ ၀ါရှင်တန် စံတော်ချိန် နံနက် ၉ နာရီခန့်က
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/19/20120အကြံပြုခြင်း
ငြိမ်းချမ်း| September 19, 2012 | တာ့ခ်နာအခြေစိုက် အမှတ် ၄၂ နယ်ခြားစောင့် တပ်ရင်းမှူး ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး ဂျာဟစ်အာဆန်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာ နယ်စပ် အစည်းအဝေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းသမားများ၏ မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားနေစဉ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများကြောင့် ဇူလိုင် ၈ ရက်နေ့ကစပြီး ရပ်ဆိုင်းထားသည့် မြန်မာ-ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် နယ်ခြား စောင့် တပ်များ ၏ လစဉ်ဆွေးနွေးပွဲကို စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့က ပြန်လည် စတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (ဓာတ်ပုံ – ငြိမ်းချမ်း / ဧရာဝတီ)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/19/20124အကြံပြုခြင်း
Arrange by Burma Task Force Canada!
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/19/20122အကြံပြုခြင်း
Published on Sep 18, 2012 by asiasociety WASHINGTON, September 18, 2012 — In her first visit to the U.S. in more than 40 years, Myanmar democracy icon and parliamentarian Aung San Suu Kyi discusses the progress of reform in her country and calls for an easing of U.S. sanctions. Introduced by U.S. Secretary of State Hillary Clinton.
ဈေးချိုတော်ကို မသမာသော အကြံ ဖော်ထုတ်ရရှိ ။
မမ္တလေး ဈေးချိုတော် ၇ (ခုနှစ်)နံပတ်ရုံ (မုန့်စုံရုံ ဟုလည်းခေါ်ကြ) နဲ့ဈေးအိမ်သာ (သန့်စင်ခန်း)အကြားမှာ ဆိုင်တွေအောက်ခြေနားက
ကြွတ်ကြွတ်အိတ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ ဓာတ်ဆီအိတ် ၄ အိတ်ကို ဈေးမဖွင့်ခင် မနက်၆နာရီဝန်းကျင်က တွေ့ရှိပါတယ်။ ဈေးခင်းဖို့ရောက်လာတဲ့
တာကြောင့်အခြားသောဈေးသူဈေးသားများနဲ့အတူ ရေစိုပုဆိုး၊ ရေစို အ၀တ်တွေနဲ့ငြိမ်းတာကြောင့် မီးတောက် တစ်တောင် သာသာပဲ ရှိခဲ့ကာခဏတွင်းမီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မနက်ပိုင်းမှာ ဓာတ်ဆီအိတ် ၄အိတ်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ခေါင်မိုးနေရာတွေမှာ ဆက်လက်ရှာဖွေရာဓာတ်ဆီအိတ်တွေဆက်တွေ့
တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ လောက်မှာတော့ ဓာတ်ဆီအနံ့ထပ်ရတာကြောင့် ဆက်လက်ရှာဖွေရာ နောက်ထပ် ကြွတ်ကြွတ်အိတ်အနက်ရောင်နဲ့ ထည့်ထားတဲ့ ဓာတ်ဆီအိတ်တွေကို ထပ်မံတွေ့ရှိပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်တာ ၄ ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်တာကြောင့် ဈေးသူဈေးသားများက တရားခံကို
အမြန်ဆုံးဖမ်းမိစေချင်နေကြပြီး မီးဘေးအတွက်လည်း စိုးရိမ်နေကြရပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ နေ့လည်(၂)နာရီခန့်တွင် ရောက်ရှိလာပြီး စုံစမ်းမှုများပြုလုပ်သွားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ဤသို့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်နှင့် ထည့်ထားသော ဓါတ်ဆီ များကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့သည်။
၈၈ မျိုးဆက် (၁၉) ဦးအား နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေး။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ရရှိခဲ့ကြသော ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ စာရင်း။ (88 Generation Students)
၁။ ပေါ်ဦးထွန်း (ခေါ်) မင်းကိုနိုင်
၁၃။ သင်းသင်းအေး (ခေါ်) မီးမီး
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ကျမ နှစ်ကြိမ်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။ နေပြည်တော်မှာတစ်ခါ၊ ကမ္ဘောဒီးယားမှာတစ်ခါပါ ။ နောက်တစ်ပတ် UN အထွေထွေအစီးအဝေးအတွက် သူလာမှာကိုလည်း ကျမတို့ မျှော်လင့်နေပါတယ် ။
ဒီနေ့မနက်ကState Departmentမှာကျမနဲ့ ဒေါ်စုတို့ ရှေ့အနာဂတ်အလုပ်တွေကို ဆွေးနွေးဖြစ်ကြတယ် ။ လုပ်စရာအလုပ်တွေကလည်း အများသားလေ ။ ဒေါ်စု US ကို ဒီအချိန် လာရခြင်းရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းတစ်ချက်ကတော့ ရှေ့မှာလုပ်စရာတွေ ဘယ်လောက်တောင် ကျန်သေးတယ်ဆိုတာ လာသတိပေးတာလို့ ကျမယူဆပါတယ် ။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးက အစ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ တခြားတိုင်းရင်းသားပဋိပက္ခတွေအရေးအဆုံးပေါ့ ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး reforms တွေကိုလည်း ဆက်လုပ်ရဦးမယ် ။ အခြေအနေပေးရင် တိုင်းပြည်ကို မှားယွင်းတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်ပို့နိုင်တဲ့ အားတွေကလည်း ရှိနေတယ် ။ ဒီတော့ နောက်ပြန်ဆွဲမဆွဲဖို့ရာလည်း သတိထားရမယ် ။
ကျမတို့ State Department နဲ့ သမ္မတ အိုဘားမားအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတော့ ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို ဆက်လုပ်ရဖို့ ပထမဆုံးတိုက်တွန်းပြောမယ့်လူတွေဆိုတာ အသေအချာပါဘဲ ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ကျန်နေသေးတယ် ။ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ စစ်ပွဲပဋိပက္ခတွေက အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး ၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို နှောင့်နှေးစေတေယ် ။ မြောက်ကိုးရီးယားနဲ့ စစ်ရေးဆက်သွယ်မှုတွေကလည်း ရှိနေသေးတယ် ။ တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့ဆိုရင် နောက်ထပ် reform တွေ လိုသေးတယ် ။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု transparency တွေကို မြှင့်တင်ရမယ် ။ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အပြောင်းအလဲ စိန်ခေါ်မှုတွေလည်း ထည့်စဉ်းစားရမယ် ။
ဒါပေမယ့် အမေရိကန်ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ စနေပြီဖြစ်တဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကို အားပေးဖို့ မြန်မာအစိုးရ၊ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ အတူရှိပါတယ် ။
အခုဆိုရင် နှစ်နိုင်ငံသံအမတ်တွေရှိတဲ့အဆင့်ထိ တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီ ။ စီးပွားရေးပိတ်ဆိုမှုလျှော့ချပြီး အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေ မြန်မာပြည်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာနိုင်အောင် လမ်းခင်းပေးခဲ့ပြီးပြီ။ အဲဒီလို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာမှာ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ဘဲ ပိုမြန်ပိုတိုးတက်သွားအောင် နည်းနဲ့ မြှုပ်နှံမှာပါ ။
US အနေနဲ့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ရော ၊ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပါ ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံထားပါတယ် ။ မြန်မာပြည်အသစ် new Burma ရဲ့ ပထမဆုံး အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ် မစ်ရှယ်လည်း အခု ကျမတို့နဲ့ အတူ ရှိနေပါတယ် ။ သူနဲ့ သူ့လက်ထောက်အတွင်းရေးမှုး Kurt Campbell တို့ ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဟာ သင့်တော်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ အကူအညီတွေ ပေးနိုင်အောင် မြန်မာပြည် မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီးက အမတ်တွေနဲ့ အမြဲမပြတ် ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်လျက်ပါ ......။
မစ္စစ် လော်ရာဘုရှ် မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေထိုင်သည့် ဟိုတယ်သို့ လာရောက် တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်စဉ် ....
မြန်မာပြည်အတွက် တက်ကြွစွာ ပံ့ပိုးခဲ့ကြသည့် အမေရိကန် ကွန်ဂရက်နှင့် ဆီနတ်တာများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နံနက်စာဖြင့် တည်းခင်းအပြီး အမှတ်တရ လက်ဆောင်များ ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Washington Post သတင်းစာတိုက်ကို သွားရောက် လေ့လာ လည်ပတ်နေတာပါ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ကြီးမြတ်သော စစ်အာဏာရှင်စနစ်မှ ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှုကို အခက်အခဲများကြားမှ တဆင့်တက်လှမ်းအောင်မြင်လာမှုအားဂုဏ်ပြူချီးမွမ်းစကားပြောကြားရင်း Asia Society မှ Global Vision Award ဆုပေးအပ်။
အမေရိကန်ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်က ချီးမြှင့်ထားတဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် ရွှေတံဆိပ် ဆုကို လက်ခံရယူ
.တော်သေးတာပေါ့ အိတ်ကပ်ထဲမှာ ငွေ ၂၀၀ အပိုပါလာလို့
ဒီနေ့ ဖိုးစိန်လမ်းမှာ သတင်းယူနေတုန်း သတင်းဖြစ်နေတဲ့ နေအိမ်ကို တရားရေးက လူကဝရမ်းနဲ့ဆွဲချဖို့နဲ့ အဲဒါကို ကူဖို့ ဒုရဲအုပ်တစ်ယောက်ပါတယ်။ သတင်းသမားထုံးစံအတိုင်းမို့ ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်မိပါတယ်။ ဒုရဲအုပ်က မရိုက်နဲ့လို့လာပြောတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဘာကြောင့်ရိုက်လို့မရတာလဲမေးတော့ မဖြေတော့ဘဲနဲ့ ထွက်သွားတယ်။ ပြီးမှ တရားရေးကလူက ရဲအင်အားကို ထပ်တိုးတောင်း ၁ နာရီကျရင် ပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်။ သွားခါနီလေးတောင် အမှတ်တရစကားလေးပြောသွားတယ်... ဒီထဲမှာ ရှိတဲ့ လူတွေကို ပုဒ်မ ၃၆ နဲ့ဆွဲမယ်တဲ့ (ပုဒ်မ ၃၆ = ဝတ္တရားနှောက်ယှက်မှု/ ပြစ်ဒဏ်က ဒဏ်ငွေ ၂၀၀ ကျပ်).....တော်သေးတာပေါ့ အိတ်ကပ်ထဲမှာ ငွေ ၂၀၀ အပိုပါလာလို့ :)
ပတ်စ်ပို့အတု နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂါလီများ ဒါကာ...
Aung San Suu Kyi Addresses Asia Society in Washing...